Diam-penina | Aprily 2007
Ka hoe mora dia mba nandefa koa
Ankapobeny — Nampidirin'i fraz @ 23:22
Teo alohaloha aho dia nandefa entan'olona mankany Madagasikara amin'ny alalan'ny MIDEX (fret ORLY : Zone Juliette) satria raha ny heno dia ao izany no mora indrindra amin'ny resaka fandefasana entana.Rehefa tonga ao amin'ilay toerana ianao dia efa misy gasy maromaro ihany koa efa mpandefa entana ao.
Asain-dry zalahy apetraka eo ambony mizana lehibe izay ny entana rehetra dia lanjaina dia mameno taratasy isan-karazany sy ny momba ny entana. Afaka asiana, afaka tsy asiana anarana ny entana. Rehefa vita izay dia miakatra any amin'ny rihana ambony mandoa ny sarany.
Ny sarany dia 4 euros ny kilao raha mandeha Alakamisy. Ka tonga dia io no nofidiako. Manome rosia ry zareo avy eo ary omeny ihany koa ny adiresy hakana azy any Antananarivo (toa eny Andraharo angaha izy izay). Dia ny Alatsinainy manaraka an'iny no tonga ny entana.
Dia tonga tokoa ny entana, ka raha entana novidiana dia matetika takian-dry zareo ny rosia orizinaly. Izay izy théoriquement.....Fa pratiquement izy mbola misy an'ilay antsoina hoe mandalo douane :-( (tsy tafiditra tao anaty paramètre :-)).
Ny dikan'izay dia mbola mety misy vola aloha.... ary tena nisy tokoa satria mahatratra 80% ny totalim-bidin'ny entana rehetra ny saran'ny douane naloha.
Expérience daholo ny fiainana, raha tsy andramana tsy hita !